ဥရောပသမဂ္ဂသည်စာအုပ်များအတွက် VAT ကိုလျှော့ချနိုင်သည် eReaders အားလုံး
မနေ့ကဥရောပပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စီးပွားရေးကော်မရှင်မှအစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာပြီး၊ စပိန်နိုင်ငံသာမကဥရောပတစ်ခွင်တွင်ဖြစ်ပွားနေသောပြင်းထန်သောအငြင်းပွားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ebooks အပေါ် VAT.
ဤကော်မတီသည်ဥရောပပါလီမန်အားနှစ်ချက်အတည်ပြုပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည် ဘယ်မှာ VAT ပေးဆောင်ဖို့ဘယ်မှာဥရောပတိုက်သားအပေါင်းတို့အဘို့တစ်ခုတည်းပေါ်တယ် နှင့်အခြားအခွန်, ထို့နောက်အီးယူနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီမှငွေလွှဲ၏တာဝန်ခံလိမ့်မယ်။ အခြားအစီအမံချမှတ်ရန်ဖြစ်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများအတွက် ebooks များအတွက် VAT နှင့်တူညီသည်။
ပထမဆုံးတိုင်းတာမှု၊ ပေါ်တယ်တိုင်းတာမှုဟာငါစိတ်ကူးကောင်းကောင်းရှိပေမဲ့ငါပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝသံသယဖြစ်လိမ့်မယ်။ တိုင်းပြည်က၎င်း၏အခွန်အလွန်သံသယဖြစ်ပါတယ် သူတို့သည်အခြားသူများကိုစွန့်ပစ်မည်မဟုတ်ပါ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများရှိလင့်ကစားဥရောပပါလီမန်သည်ဤလျှော့ချထားသော VAT အတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်
ဒါပေမယ့်ဒုတိယအတိုင်းအတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ကျွန်တော်တို့အများစုကဒီလိုမျိုးဖြစ်သင့်တယ်လို့ထင်ကြတယ် ဂျာမနီကဒီကိစ္စကိုမပြောရင်၊ နောက်ဆုံးမှာတော့သူကအတည်ပြုလိမ့်မယ်.
စပိန်မှာအဲဒါကိုဆိုလိုလိမ့်မယ် ebooks တွေမှာ VAT ၄% ရှိတယ်, စပိန်တွင်စာအုပ်များနှင့်စာနယ်ဇင်းများလက်ရှိအခွန်လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိသောကြောင့် VAT၊ ထို့အပြင်၎င်းသည် ebook ဈေးကွက်တွင်တိုးပွားလာခြင်းနှင့်စာအုပ်ရောင်းချခြင်းကျဆင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ဒါကြောင့်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လိမ့်မယ်။ ဥရောပလော်ဘီကတောင်ဒီဥပဒေကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဥရောပကော်မရှင်တွေ၊ တရားရုံးတွေသာမကဘဲ၊ သူတို့က ebook နှင့်စာအုပ်သည်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်အခွန်အမျိုးအစားတူညီရမည် သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? သင်ဒီ VAT ဥပဒေအတည်ပြုလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » ဥရောပသမဂ္ဂသည်စာအုပ်များအတွက် VAT ကိုလျှော့ချနိုင်သည်
သောကြာနေ့ Update ကို: Tolino နှင့် Kindle အသစ်သောအပြောင်းအလဲများကိုလက်ခံရရှိသည်